Zimbabwe yapinda muzuva repiri ichiita musangano wakanangana nezvenyaya dzekuchengetedzwa kwenzou kana kuti “elephant summit.” Zimbabwe nedzimwe nyika dzine nzou dzakawanda dziri kuda kuti dzibvumidzwe nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES kuti dzitengese nyanga dzenzou sezvo dziri kuti dzawandisa.
Vamwe vanoti Zimbabwe nenyika dzine nzou dzakawanda dzinofanira kubuda mugungano recites dzikaramba dzichirambidzwa kutengesa nzou. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dziri kuti nyanga dzenzou dzikanzi dzitengeswe mhuka idzi dzinotanga kuurayiwa zvakanyanya kusvika dzapera mumasango.
Mukuru mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks VaFulton Mangwanya vaudza musangano uyu kuti zvinorwadza kuti pane masangano anoshanda akazvimirira anorwira kodzero dzemhuka asingade kutarisana nechokwadi uye anotaurira boka reCITES zvisiri izvo pamusoro penyaya dzehuwandu hwenzou nekuchengetedzwa kwadzo. Vati kuita kwakadai kunoita kuti nyika yakaita seZimbabwe ifunge kuti zvinogona kuve zvakanaka kubuda musangano iri.
Vati chinangwa chikuru chemusangano uri kuitwa uyu ndechekuti nyika dzemuAfrica dzikwanise kutaura nenzwi rimwe chete zvisinei nekusiyana kwakaita zvinhu munyaya dzezviwanikwa zvakaita semhuka munyika idzi.
VaMangwanya vati havangakwanise kuti vataure kuti Zimbabwe ichatora danho ripi kana sangano reCITES rikaramba richirambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvimwe zvakadaro vakati zviri kuhurumende kuti yotora danho ripi.
Vanhu vakawanda vari kupinda musangano wekuzeya nezvekuchengetedzwa kwenzou kuHwange vati zvakakosha kuti sangano reCITES rinzwisise kuti nzou dzemunyika dzeBotswana, Zimbabwe neZambia dzawandisa zvekuti nyika idzi dzinofanirwa kubvumidzwa
kutengesa nyanga uye zvimwe zvinobva pamhuka idzi. Izvi zvatsinhirwa naVaEmmanuel Fundira veZimbabwe Safari Operators Association avo vati sangano reCITES harifanirwe kutarisi divi iwho hupenyu hwevanhu huri panjodzi.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Professional Hunters and Guides Association VaJohn Laing vatiwo panotaurwa nezvekukosha kwekuchengetedzwa kwenzou vanhu vanokangagwa kuti huwandu hwevanhu pasi rose kunyanya muAfrica huri kukura, uye mamiriro ekunze ari kuramba achishanduka izvo zvichaita kuti matambudziko ari kuunzwa nekuwanda kuri kuramba kuchiita nzou muZimbabwe, Botswana neZambia awedzere.
Ishe Nelukoba vanove ishe wenzvimbo inosanganisira Hwange National Park vaudza musangano uyu kuti vanhu vemunharaunda yavo vanonzwisisa kukosha kwakaita nzou nedzimwe mhuka asi mhuka idzi dzawandisa izvo zvinovapa kuti vatsigire danho rekuti Zimbabwe medzimwe nyika dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou nezvimwe zvinobva pamhuka idzi.
Izvi zvatsinhirwawo naIshe Nekatambe avo vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanorasikirwa nehupenyu pamwe nekudyirwa zvirimwa zvavo pasina zvakawanda zvavanowana kubva mukuchengetedzwa kwemhuka idzi.
Chiapangamazano munyaya dzemhuka nezvimwe zviwanikwa vanoshanda vakazvimirira VaEmmanuel Koro vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinogona kuitika kuti Zimbabwe itore danho rekubuda mugungano reCITES.
America, Britain nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kuramba kuti Zimbabwe itengese nyanga dzenzou dzichiti kuda kuita izvi kunopa kuti dzitange kuvhimwa zvakanyanyisa kusvika dzapera sezvakaitika kune dzimwe nyika. Svondo rapera Zimbabwe yakakoka nhumwa kubva kuNetherlands, Germany, France, Britain, Switzerland, Canada neAmerica kuti dzione kuwanda kwaita nyanga dzenzou dziri mudura reZimbabwe.
Vachitaura nevatori venhau vainge vakamiririra nhumwa idzi mumiriri weSwitzerland muZimbabwe VaNiculin Jager vakati vari kutyira kuti zvakakosha kuti nyika dziite mushandirapamwe kuchengetedza nzou kuyedza kumisa makoronyera anozotenga nekudzitengesa nyanga dzenzou. Nyika dzakaita seChina neJapan dziri kumusangano uri kuitwa muZimbabwe dziri kukurudzira kuti nyanga dzenzou dzitengeswe.
Musangano uyu wakatanga nezuro uye unopera nemusi weChina uye makurukota ezvezviwanikwa emune dzimwe nyika dzemuAfrica dziri pamusangano uyu anotarisirwa kubuda nezvisungo zvavachaenda nazvo kumusangano weCITES, COP-19 uchitwa kunyika yePanama muna Mbudzi wegore rino.